Vanenge vanhu gumi nevashanu vakaurayiwa mune tsaona yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva mafashama
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Vanenge vanhu gumi nevashanu vakaurayiwa mune tsaona yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva mafashama
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Pakati pehusiku, dzinoda kusvika makumi maviri kufa kwakave kusimbiswa, nerufu rwakati wandei rwakamhan'arwa muNew York, New Jersey, Pennsylvania, uye imwe muMadganis.
Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwakakonzerwa nemafashama makuru.
Dutu Hurricane Ida zvisaririra zvakagura nzira inouraya kuburikidza kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States.
New York neNew Jersey magavhuna anozivisa mamiriro ekukurumidzira.
Mvura yakawanda yakarova nzvimbo yeNew York City metro Chitatu manheru kusvika China, zvichitungamira mukufa kwakawanda, sezvo zvakasara zveDutu Ida zvakacheka nzira inouraya kuyambuka kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweUnited States.
Gavhuna weNew York Kathy Hochul akazivisa mamiriro ekukurumidzira sezvo zvisaririra zveIda zvakakonzera mafashama makuru muNew York City nedzimwe nzvimbo dzenyika.
Gavhuna weNew Jersey Phil Murphy anga ataurawo mamiriro ekukurumidzira achipindura Ida, sezvakaita New York City Meya Bill de Blasio pakutanga kwehusiku.
Huwandu hwevakafa hwakawedzera zuva rese neChina sezvo vakuru vakuru vakatanga kunzwisisa kukura kwenzvimbo iyi. Pakati pehusiku, vangangoita makumi maviri vakafa vaive vasimbiswa, nerufu rwakati wandei rwakamhan'arwa muNew York, New Jersey, Pennsylvania, uye imwe muMadganis.
Vatatu vekufa kwakaitika mune imwechete imba iyo New York City nzvimbo yeQueens. Nhengo nhatu dzemhuri, kusanganisira mukomana ane makore maviri, vakanyura munharaunda yeFlushing. Vamwe vaviri vakaurayiwa munharaunda yeJamaica apo mafashama akadonha madziro eimba yavo.
Dzimwe nzufu ina dzakaitika pane imwe furati muElizabeth, New Jersey, Iyo AP yakashuma. Meya waErizabheti akange ambotaura nezvekufa kushanu kubva kunzvimbo iyi.
Munzvimbo huru yeFiladelphia, kufa kwevanhu vatatu kwakasimbiswa nevakuru vakuru, kusanganisira kufa kwemukadzi akarohwa nemuti unodonha muUpper Dublin Township.
MuRockville, Maryland, murume ane makore 19 akaurawa mumafashama kuRock Creek Woods Apartments paTwinbrook Parkway. Sekureva kwaFox5, murume uyu aiyedza kubatsira amai vake paakakukurwa.
Paive zvakare nekufa kwevanhu kwakawanda mumotokari, njodzi inosiririsa iyo yakaverengerawo kufa kwemutyairi mumwechete muPassaic, New Jersey. Mvura yemafashama payakamhanya mumigwagwa muguta, mutyairi wemakore makumi manomwe akabviswa mushure mekunge mhuri yake yanunurwa.
Chiitiko chakadai chenhoroondo yemamiriro ekunze chakakonzera zvakare National Weather Service (NWS) hofisi yeNew York kuti ibudise yambiro yayo yekutanga-nguva yemafashama emvura, sezvo imwe yakapihwa kuchamhembe kweNew Jersey uyezve imwe yakapihwa zvikamu zveNew York City. Yambiro yakachengeterwa mafashama anotyisidzira hupenyu, uye inoshandiswa "zvakanyanya zvisingawanzoitika mamiriro apo mvura inonaya zvakanyanya iri kutyisidzira zvakanyanya hupenyu hwevanhu nekukuvara kwakaipisisa," yakadaro NWS.